गर्भावस्थामा पौष्टिक खाना र हेरचाह कसरी गर्ने ? – Public Health Concern(PHC)
गर्भावस्थामा पौष्टिक खाना र हेरचाह कसरी गर्ने ?
in आमा स्वास्थ्य, मेरो स्वास्थ्य : मेरो सरोकार, स्वास्थ्य अभियान
गर्भमा रहेको शिशुले आफ्नो आमाले खाएको खानाबाट नै पौष्टिक तत्व पाएर हुर्कन्छन् । गर्भधारणदेखि नै आमाले दिनहुँ खाने साविक खानाका साथै एकपटक थप पौष्टिक तथा सन्तुलित खाना खानुपर्छ ।
सुत्केरीरस्तनपान गराइरहेकी महिलालाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने ७ समूहका विभिन्न खाद्यवस्तुहरु (१. अन्न वा जमिन मुनी फल्ने कन्दमूल, २. गेडागुडी, तेलहन, बियाँ र , ३. दूध तथा दूग्ध पदार्थ, ४. मासु/माछा, ५. अण्डा, ६. भिटामिन ए पाइने फलफूल र तरकारी जस्तै ९ पाकेको मेवा, आँप, सुन्तला, गाजर र फर्सी, तथा ७. अन्य फलफूल तथा तरकारी) मध्येबाट कम्तिमा ४ समूहका खानेकुराहरु खुवाउनु पर्दछ। सबै खाना समूहबाट विविध खाना खानाले सुत्केरी अवस्थामा सुक्ष्म पोषक तत्वको कमीबाट टाढा रहन सकिन्छ ।
गर्भवती स्वस्थ हुन र तन्दुरुस्त रहन प्रत्येक दिन साविक भन्दा १ पटक थप खाना खाएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सुत्केरी महिलाहरुलाई यस्तो अवस्थामा विशेष गरी ज्वानोको झोल, गेडागुडीको झोल, सुत्केरी मसला (मेथी, गुद, काजु, बदाम, छोकडा, बत्तिसा, मिश्री, सख्खर), थप पोषिलो खाना खुवाएमा दुध उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ । यसको साथै सुत्केरीरस्तनपान गराइरहेकी महिलालाई साविकको खानाको साथसाथै थप २ पटक पोषिलो खानाहरु खुवाउनु पर्दछ ।
त्यसका साथसाथै रक्तअल्पताबाट बच्न स्थानीय स्तरमा पाइने खाना जस्तै टुसा उमारेको गेडागुडी, हरियो सागपात, कुरिलो, च्याउ, आदि पनि खुवाउनु पर्दछ। बालबालिका जन्मिएपछि आमालाई ४२ दिन भित्र १ मात्रा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउन स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वंय सेविकासँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । भिटामिन ए क्याप्सुल खानाले आमाको दूध थप पोषिलो बनाउँदछ जसले बालबालिकालाई स्वस्थ र बलियो बनाउँछ । भिटामिन ए धेरै मात्रामा पाइने खानेकुराहरु जस्तै अण्डा, कलेजो, पाकेको मेवा, फर्सी, गाँजर पनि खुवाउनु पर्दछ ।
शाकाहारी वर्गको हकमा भने उनीहरुले गेडागुडी, टुसा उमारेको गेडागुडी, दूध तथा दूग्ध पदार्थ, भटमास, तेलहन (oil seeds and nuts) लगायतका खानेकुराहरुमा जोड दिनुपर्छ।
गर्भवती भएको चौथो महिनादेखि सुत्केरी भएको ४५ दिनसम्म दिनको एक चक्कि आइरन फोलिक एसिड खानुपर्छ । आइरन फोलिक एसिड चक्कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क पाईन्छ ।
पहिलो गर्भवती जाँचमा स्वास्थ्यकर्मीसँग जुकाको औषधी (एलबेन्डाजोल) लिनुपर्छ । गर्भवती महिला र शिशुलाई टिटानस र भ्यागुते रोगबाट बचाउन स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार टिटि खोप पनि लिनुपर्छ ।
गर्भवती आमाले आयोडिनयुक्त नुन खाएर शिशुलाई सुस्त मनस्थिति, होचोपुड्को, छाला र कपालको समस्या, गलगाँड आदि हुनबाट बचाउनु पर्दछ ।
किशोरी/गर्भवती महिला र स्तनपान गराई रहेकी महिलाले धुम्रपान, मद्यपान गर्नु हुदैन तथा धुवाँमा बस्न हुदैन । आमा र बालबालिकालाई स्वस्थ राख्न श्रीमान्ले सुत्केरी श्रीमतीले दिनको थप २ पटक पोषिलो खाना खाएकी छिन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
खानेपनीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र पानी पिउनुपर्छ । पानीलाई उमालेर, क्लोरिन झोल हालेर वा फिल्टर गरेर शुद्धिकरण गरेर पिउनुपर्छ । युनिसेफ नेपाल !
Tags: ANCCare of pregnancyfood for healthy babyhealth infoHealthy dietJanaswaasthya SarokaarP HC NepalPregnancy and Balance dietPublic Health Concern
Scholarship Entrance Examination Center of Diploma and PCL Level – CTEVT
समायोजन भएका कर्मचारी हाजिर नगराउने पालिकाको अनुदान रोकिने ! अधिकारीलाई कारवाही हुने !